Nyamavhuvhu anosiya Telefonica munhoroondo dzakaderera Ehupfumi Zvemari
Mwedzi uno uchadzika munhoroondo yekukweva iyo zvikamu kusvika panguva yayo yakaderera mumakore achangopfuura. Iko mutengo wayo wanga wave pamatanho e7 euros pamugove mushure mekudzikiswa kubva pamatanho e9 euros. Nekudzikira padyo padyo ne20% munguva ino, chimwe chinhu icho chaisave mumakore apfuura. Yakakosha, sezvo Telefónica ichionekwa seimwe yetsika dzakadzikama muSpanish inosarudza indekisi, iyo Ibex 35. Asi chii chaizvo chakaitika kune mutyairi wezvekufambiswa kwemashoko kune vanoita mari?
Icho chokwadi chekuti kutengesa kwave kuiswa pachena pakutenga kunokonzerwa nekuti yavo yehunyanzvi chimiro yakanyanya kuderera. Kuputsa zvakakosha tsigiro Ini ndaive ne9,10 euros. Kusvika padanho rekuti rwizi rwekutengesa rwatora mukana weichi chiitiko. Kusvika padanho remitengo yazvino uye izvo zvinogona kuve chikamu chekupinda kuti kuchengetedza kunobatsira kubva ikozvino.
Zvisinei, kune simba majeure rekutsanangura zviri kuitika neTelefonica panguva ino chaiyo. Izvo zvinokonzerwa nekushanda kweimwe mari yekudyara ine yakasundira mitengo pasi nechinangwa chekupinda muzvinzvimbo zvavo nemitengo yakakwikwidza yakawanda kupfuura kusvika ipapo. Mupfungwa iyi, mashandiro evamiririri vezvemari anogona kupa ruzivo nezve yako nzira yekudyara inofanirwa kunge iri mumazuva anotevera.
1 Telefónica: yabata pasi here?
2 Kubata kwemari
3 Haisi mhedzisiro yakanaka
4 Tora 8,6% kupfuura muna 2017
Telefónica: yabata pasi here?
Mukuona kwechikamu chakakura chevanoongorora zvemari, mutengo wezvikamu ungangodaro wakasvika pasi. Nekudaro, kiyi ichave yekuremekedza rutsigiro rwayo rutsva, irwo rwuri kwazvo anenge 7 euros chiito. Kana ikatsigira, haigone kutongwa kunze kuti inodzokera kumutengo wayo mumwedzi yapfuura, kana kutomboedza kusvika padyo ne10 euros. Chero zvazvingaitika, pamitengo yazvino, zvese zvinoita kunge zvinoratidza kuti kukosha uku mukana webhizinesi. Zvirinani munguva yepakati nepakati, inova nguva yakakodzera yekusingaperi yekuisa mari muiyi kukosha kwakakosha kwemari inoshanduka yenyika.
Kune rimwe divi, hazvigone kukanganwika kuti muterevhizheni opareta ndiyo imwe yetsika dzerupo mukuparadzirwa kwe Zvikwereti kune vagovana. Uine kudzoka kwakadzikama uye unodzivirira Hazvishamisi kuti ivo vane mari yakatarwa mukati meiyo musiyano uye negoho repamusoro pane izvo zvigadzirwa zvikuru zvakagadzirirwa kuchengetedza. Semuenzaniso, yakatarwa-nguva dhipoziti, maakaundi-emari maakaundi kana kunyange nyika zvisungo. Iko mune zvese zviitiko kubatsirwa kwe1% hakuwanzo kupfuurwa, kunyangwe kubva kune mamwe mamodheru anobatsira kusvika makore mashoma apfuura.
Chero zvazvingaitika, mwedzi waGunyana wakaratidza basa rakakura rakaitwa nemari yekudyara mukuunza zvikamu zvavo kumitengo yazvino yemitengo. Pane zvakawanda zviri panjodzi yemari iyi uye parizvino vari kufarira chokwadi chekuti mitengo yeTelefonica yakadzika kwazvo uye pamatanho asingaonekwe mumakore apfuura. Kubva nemaonero aya, pane zvakawanda zvaunogona kuwana pane kurasikirwa. Hazvishamisi kuti vaongorori vanofunga kuti atove nazvo zvishoma kudzikira kufamba. Kusvika pakuti inogona kuve chinhu chekutenga.
Mune imwe tsinga, kana uchizotungamira mashandiro enguva refu, hauzove nematambudziko mazhinji kuti pane imwe nguva zviito zvako zvigone kusvika 9 kana 10 euros kana kunyange akakwirira mazinga mumutengo wayo. Mune mamwe mazwi, pamwe nekukwanisa kuongororwa kweanosvika padyo ne30%. Kunyangwe paine chokwadi chekuti mune ipfupi term hapana mubvunzo kuti kusagadzikana kwakaiswa mukuumbwa kwemitengo yavo. Iko kwainogona kuramba ichipa zvinopfuura imwechete isingade, kunyanya kana misika yemari ikachinja maitiro uye iyo yazvino yekutengesa ikakunda pakati pevatengesi. Nemasimba zvishoma zvishoma zvinozivikanwa kusvika zvino.
Haisi mhedzisiro yakanaka
Chimwe chinhu chingatsanangure kuderera kwakanyanya muzvikamu zveTelefonica ndechekuti mhedzisiro yaro yebhizimusi yaodza moyo huwandu hwakawanda hwevatengesi. Mitsara yavo yebhizinesi haisi kupindura zvinotarisirwa zvakagadzirwa kubva pakutanga. Uye izvi zvinotsanangura kuti nei masheya adzikira nekuda kwekutya kuti purofiti yekambani inogona kutambura munzvimbo dzinouya. Mune mamwe mazwi, izvi hazvisi zvebhizimusi mhedzisiro iyo vadiki nepakati varimi vakafarira.
Matambudziko muhupfumi huri kusimukira ndechimwe chinhu kutsanangura kudonha kwakakosha mumitengo yemushandi wenyika. Nekuti zvazviri, matambudziko enyika dzeAmerica anogona kukuvadza zvakanyanya Telefónica muzvinangwa zvayo zveiyo pfupi nepakati. Mupfungwa iyi, yake yekupedzisira mhedzisiro yebhizinesi ivo vanoratidza kuoma mitezo zvishoma munhoroondo dzavo semhedzisiro yezvimwe zvezvikonzero zvataurwa pamusoro apa.
Tora 8,6% kupfuura muna 2017
Chero zvazvingaitika, zvinofanirwa kusimbiswa kuti mushandi wenyika akawana mhindu inokwana 1.739 mamirioni euros muhafu yekutanga yegore, inomiririra 8,6% kupfuura panguva imwechete gore rapfuura. Zvese izvi kunyangwe iyo kudonhedza mari nekuda kwekukanganisa kwemari, uye kuti vakatamba vachipesana nezvido zveTelefonica.
Mukupesana, chikwereti chemambure - imwe yenjodzi dzayo huru - chakamira pamamirioni 43.593 panguva ino. Izvi zvinomiririra kuti ingangoita gumi muzana pasi pegore rapfuura chete. Kunyangwe iro rakanyanya kukosha dhata nderekuti rinodzora chikwereti chayo chechishanu chakateedzana kota, kunyange hazvo isina kuve nemhedzisiro yakawanda pamutengo wezvikamu zvayo. Iko Spain inoramba iri musika wekutanga wekambani yemafoni uye chinhu chinofanira kutariswa nevanoisa mari kuitira kuti kuchengetedza kwavo kubatsire kwemakore mashoma anotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Nyamavhuvhu anosiya Telefonica pazvakadzikira nhoroondo
Maitiro ekuwana hushoma mudyandigere pamudyandigere?